မိုက်ခရိုနားကြပ်များ | စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်လှည့်စားခြင်းအတွက် Micro Earpiece, Camera and Watch - eXamYo.com
အဆိုပါ eXamYo မိုက်ခရိုနားကြပ် နီးပါးဖြစ်ကြသည် မျက်မြင်မရသောမိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်အတူ ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်ရေးမှအဆင်ပြေအောင် စာမေးပွဲအတွက်ကူးယူပါ.
၎င်းကိုနားထဲသို့ထည့်ပြီးသင့်လက်ထောက်ကိုတစ် ဦး မှတစ်ဆင့်ကောင်းကောင်းနားထောင်နိုင်သည် ခေါ်ဆိုခ နှင့်ကျေးဇူးတင်စကားဆက်သွယ်ပြောဆို လျှို့ဝှက်မိုက်ခရိုဖုန်းသို့မဟုတ်အဖြေများကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ အသံမှတ်စုများ သူတို့ကိုကစားပါ။
ယခုသင်သည်မည်သည့်ကိုကျော်သွားနိုင်သည် စမ်းသပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးမှကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိုက်ခရိုနားကြပ်, အ အီလက်ထရောနစ်ခုတ် of အတတ်ပညာ ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး
eXamYo Mini Micro နားကြပ်
သင့်နားရှိအသံကိုနားထောင်ပါ ကြိုးမဲ့, ကြိုးတွေမပါဘဲ။
ပြီးပြည့်စုံသောစမ်းသပ်ကိရိယာအစုံမည်သည့်လက်ကိုင်ဖုန်းသို့မဟုတ် MP3 နှင့်မဆိုလိုက်ဖက်သည်။
နှင့် eXamYo Mini Micro နားကြပ် သင်လုပ်နိုင်သည် မည်သည့်စစ်ဆေးမှုကိုမဆိုအောင်မြင်နိုင်သည် အလွယ်တကူပဲ!
eXamYo ဂန္ထဝင် Micro Earpiece
စာမေးပွဲများအတွက်ကူးယူပါ စုစုပေါင်းလုံခြုံရေးနှင့်အတူ။ သင်အပြင်ဘက်ရှိသင်၏လက်ထောက်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် စမ်းသပ်.
နှင့် eXamYo ဂန္ထဝင် Micro Earpiece သင်လုပ်နိုင်သည် မည်သည့်စစ်ဆေးမှုကိုမဆိုအောင်မြင်နိုင်သည် အလွယ်တကူပဲ!
eXamYo Pro မိုက်ခရိုနားကပ်
နှင့် eXamYo Pro မိုက်ခရိုနားကပ် သင်လုပ်နိုင်သည် စာမေးပွဲအောင်ပါ အလွယ်တကူပဲ!